musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » WTM London Yakavhurika: Kusunungura kana Kutyisa?
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
World Travel Market yakavhurika; World of Tourism iri kusangana muLondon - uye musangano unofara kusvika parizvino.
Zvinoenderana nefungidziro dzakaburitswa neWorld Travel Market (WTM), varatidziri vanobva kunyika dzinopfuura zana vakasimbisa, nevatengi vanobva kunyika dze100 nematunhu kuenda kuratidziro yekutengeserana iri kuitika muLondon (Mbudzi 141-1).
Masvondo maviri apfuura, World Tourism Network yakakwidza Reed, murongi weWTM London, kuti ape maski kumeso.
World Travel Market yakavimbisa kuchengetedzeka kune vese vatori vechikamu ndiyo yaive yakakosha.
Vhiki mbiri yapfuura, WTN yakaudza eTurboNews uye yakatumira pawebhusaiti yayo: "Tinokurudzira kuti upfeke mask kumeso kana uri munzvimbo dzemukati nevanhu vausingawanzo kusanganisa navo."
Iyo World Tourism Network yaikurudzira WTM masvondo apfuura kuti ienderere mberi uye kuraira mask kupfekedza munhu wese.
Nhasi, mikova yeExcel Exhibition Center muLondon yakavhurwa na10:00 am munaNovember 1 kuitira. World of Tourism kuti iuye pamwe chete, kukwazisana zvekare, ndokumbundirana.
Masks aive pasi pekudiwa kwakaderera, uye anenge munhu wese anoshanda kana kuenda kunzvimbo iyi, kusanganisira vashandi vekuresitorendi, haana kuedza kupfeka mask.
Mbudzi 1 raive zvakare zuva iro Hurumende yeChirungu yakadzoreredza zvinodiwa, zvinoshamisa pazuva iro mimwe mishumo inoti mibhedha yevanorwara zvakanyanya haisati yave kuwanikwa uye nhamba dzeCCIDID-19 dzaikwira.
Mhosva, nyaya dzinoshanda, kuchipatara, uye huwandu hwerufu huri kukwira muUK, asi nzvimbo dzezviitiko seExcel, mabara, uye makirabhu ehusiku akavhurika uye vanhu vanonzwa vasunungurwa.
Kwaive kusunungurwa uku kwakaitika paWorld Travel Market muLondon nhasi. Kufamba nekushanya imhuri hombe, uye wakaona misodzi, uye kubata kwevanhu kwakadzoka apo shamwari dzekare dzakasangana zvakare mushure memakore maviri ezvirambidzo zveCOVID.
WTM yakaongorora marekodhi ekudzivirira kune wese anopinda munzvimbo yekuratidzira, asi izvi zvakakwana here? Kuchipatara kutsva kwakawanda kunenge kuri nevanhu vakabayiwa zvizere.
World Travel Market yakanyarara, kune nzvimbo dzakawanda dzakavhurika uye nzvimbo dzekugara, uye kunyangwe yakazara kana iri mumutsara wekofi, zvinoreva kuti vatori vechikamu vakakwanisa kupararira muhoro dzezviratidziro.
Vashandi - hapana mask
Hon. Edmund Bartlett achigadzirira kubvunzurudza neCNN Richard Kutsvaga
Costa Kofi ruoko sanitizer isiri kushanda
Thailand Press Musangano
Madhizaini estand aive madiki, asi nzvimbo dzemastand hadzina kunyanya kushanduka. Kune varatidziri vashoma uye vashanyi vari kuuya. Saudi Arabia hongu yakaratidza simba mukuratidzira kumira kunoshamisa paPavillion. Saudi Arabia ndiyo yepamutemo chiitiko mubatsiri weWTM.
Kana WTN ichigona kuratidzira mumavhiki maviri, hapana nyaya nyowani dzakabuda kunze kwemasiki, pasina mutemo wekufambidzana munharaunda, zvichareva chitsauko chitsva chezviitiko zvenguva yemberi muBritain uye musangano uye indasitiri yekukurudzira kumwe kwakatangwa.
eTurboNews achange achiratidza aIMEX America, Musangano uye Incentive Trade Show muLas Vegas Mbudzi 8-11.
eTurboNews iri zvakare official media partner yeWorld Travel Market London.